Ny 8 Toetra mampiavaka ny "V" marika tsara | Martech Zone
Alatsinainy, May 18, 2020 Alakamisy Febroary 25, 2021 Douglas Karr
Nandritra ny taona maro dia fanaoko ny nanoratra momba ny marika. Vondron'olona malemy paika miady hevitra momba ny loko maitso amin'ny sary famantarana no toa tsy nahomby tamiko. Toy ny vidin'ny masoivohon'ny marika izay nandoa vola an'aliny na an-jato mihitsy aza.
Ny momba ahy dia momba ny injeniera. Ny kaody loko tokiko izay tiako fotsiny dia ny mampifandray zavatra iray. Ny asako dia ny famahana ny olana izay simba ary avy eo manamboatra azy. Ny lojika sy ny fikaroham-bahaolana no fahaizako - ary nentiko ho any amin'ny marketing tahiry ary amin'ny Internet ihany izany. Ny analytics dia ny tetikadiko ary tsy miverina fotsiny aho amin'ireo olana izay nanakana ny mpanjifa tsy hanatsara ny taham-pitan'izy ireo.
Nandritra ny folo taona lasa, na izany aza, ny fahatsapako sy ny fankasitrahako ny marika dia niova be. Ampahany amin'ilay olana ny hoe rehefa niverina tamin'ny laoniny ny loharanon'ity olana ity isika - dia matetika no namantatra ireo lesoka tamin'ny ezaky ny mpanjifa amin'ny Internet. Raha nanana marika sy feo mafy ny mpanjifa dia nahagaga fa tsotra be taminay ny nisambotra ny fanilo, namokatra atiny mahavariana, ary niasa avokoa.
Raha tsy nanao fanatanjahantena marika mihitsy ny mpanjifa dia nampanaintaina foana ny nahatakatra hoe nanao ahoana izy ireo, ny fomba nanehoana azy ireo an-tserasera, ary ny fomba fananganana marika natambatra izay hanomboka heken'ny olona sy atokisany. Ny marika no fototry ny ezaka marketing rehetra… Fantatro izany izao.
Rehefa nijery ireo mpanjifa be marika be aho dia nanoratra toetra manokana 8 izay hitako tao amin'ny marika nomen'izy ireo. Ho fialamboly dia nitady teny niaraka tamin'ny litera "V" aho hifanakalo hevitra hevitra tsirairay… amin'ny fanantenana hanamora ny fitadidiana azy.
Visual - Izany no eritreretin'ny ankamaroan'ny olona marika. Io ny sary famantarana, marika, loko, typografia, ary ny fomban'ny fananana hita maso mifandraika amin'ny orinasa iray na ny vokatra sy serivisy omeny.
Voice - Ankoatra ny sary, rehefa miroso amin'ny paikady ho an'ny atiny sy ny fiaraha-monina isika, dia mila mahatakatra tsara kokoa ny feon'ny marika iray. Izany hoe, inona ny hafatray ary ahoana no ampitantsika azy mba hahafantaran'ny olona hoe iza isika.
Vendée, - Ny marika iray dia tsy misolo tena ny orinasa fotsiny - fa mamorona fifamatorana ara-pientanam-po amin'ny mpanjifa koa. Iza no tompoinao? Hita taratra amin'ny sary sy ny feonao ve izany? Ny coke ohatra dia manana endrika bika sy feo falifaly. Saingy ny Red Bull dia tototra kokoa ary mifantoka amin'ny mpihaino azy ireo mpankafy fanatanjahan-tena.
manodidina - Iza ireo mpifaninana manodidina anao? Indostria inona ianao? Ny ankamaroan'ny orinasa dia manompo indostrialy manokana ary samy manana ny marika marika miavaka azy nefa koa mifanaraka amin'ny indostria dia tena zava-dehibe. Misy ny mpanakorontana, azo antoka… fa amin'ny ankabeazany, te-hiseho ho mendri-pitokisana sy mendrika ho an'ny namanao ianao.
fiovaovana - Ary satria tsy te hitovy endrika amin'ny endrika mitovy amin'ny an'ny namanao ianao, ahoana no hanavahanao ny mampiavaka azy aminao? Inona ny anao Tolo-kevitra momba ny sanda tsy manam-paharoa? Misy zavatra tsy maintsy miharihary amin'ny marika mampiavaka anao amin'ireo mpifaninana aminao.
Hatsaran-toetra - Tsy ampy amin'izao andro izao ny ho tsara amin'ny zavatra ataonao, tokony hanana toetra tsara na fananana mifandraika amin'ny marikao koa ianao. Angamba zavatra tsotra toy ny fanaovana ny marina - na sarotra kokoa amin'ny fomba fanompoana ny mpiara-monina eo an-toerana. Te-hanao raharaham-barotra amin'ny olona misy fiatraikany ny olona - tsy ny fanamboarana trosa fotsiny.
sarobidy - Maninona no mendrika ny mandoa anao amin'ny vokatrao sy serivisinao ity? Ny zava-drehetra momba ny marikao dia tsy maintsy miantoka fa ny sandan'ny asanao mihoatra ny vidiny. Ireo dia mety ho fanatsarana ny fahombiazany, fananganana fangatahana bebe kokoa, fampihenana ny vidiny, na zavatra maro hafa. Fa ny marikao dia tokony haneho ny sanda entinao amin'ny mpanjifanao.
Vehemence - Teny mahafinaritra inona, eh? Inona no tadiavin'ny orinasanao? Ny firehetam-po dia tokony ho fitaovam-piadiana miafina isaky ny fizotran'ny marika satria areti-mifindra ny vehemence. Ny fientanam-po dia fientanam-po manala ny olona amin'ny tongony. Ahoana no itarainan'ny marikao amin'ny fitiavanao?
Ataovy ao an-tsaina, tsy manam-pahaizana momba ny marika aho… fa raisinay izay toerana ialan'ny manam-pahaizana momba ny marika ary hitanay fa mora kokoa ny manisy olana sy mameno ny banga amin'ny votoatiny rehefa mahatakatra, afaka mifanandrify ary manome ny marika amina orinasa iray izahay
Raha te-hamaky bebe kokoa momba ny marika ianao, dia manoro hevitra ny bokin'i Josh Mile aho - Brand sahisahy. Tena nanokatra ny masoko ny sasany amin'ny olana lehibe niarahanay tamin'ny mpanjifa sasany sahirana sy ny ezaka hafa izay ataonay ao anatiny.
Tags: feo marikamarikaorinasasarobidyfiovaovanavehemenceVendée,manodidinahatsaran-toetramarika hita masofeon'ny marika